Miyey fududahay in la helo dib u eegis heer sare ah 2016?
Weligaa ma ka yaaban tahay qiimaha dib u celinta ay keeni karto ololehaaga dallacaadda? Marka la eego erayga "qiimaha:" macnaheedu maahan in juice juice aad ka heli karto boggaaga iyada oo loo marayo xiriirada dibadda. Waxaan ka hadlayaa ku saabsan ku soo laabashada maalgashiga foomka ganacsigaaga internetka ee dakhliga sare. Waxaa jira websiyo badan oo iibiya xiriiryo, ka dibna, haddii ay jirto baahi weyn, waxaa jira dad badan oo jecel inay bixiyaan khudradda. Aan ka falanqeyno sida hawlahaasi ay u saameyn karaan dadaalka nalalka raadinta raadinta. Ugu horeyntii aynu eegno xiriirka iibsiga iyo iibinta warshadaha. Qalabka iibsashada iyo iibinta
Ilaa iyo inta Google laga aqbalo dib udabeenta ah darajo saameeya, dhabarka ayaa noqon doona baahida aadka u sareysa ee milkiilayaasha bogagga iyo websaydhka.
Xidhiidhka iibsigu wuxuu ku dhacay bartamihii 2000-meeyadii, isbeddelka warshadaha oo dhan weligiis. Waqtigaas oo dhan wershadda oo dhan waxay kor u qaadday iibinta dhabarka. Qaar ka mid ah ilaha websaydhka ah waxay ku bixiyaan dib uqurxin kiro ah. Qiimeeynta hal xiriirka Renault wuxuu ka bilowday $ 30 bishii. Xidhiidhyadani waxay u adeegsadeen xariiro dhinacyo ah.
Muddo ka dib, Google, iyo sidoo kale makiinado kale oo raadin muhiim ah, waxay bilaabeen in ay ciqaabaan goobaha kuwaas oo si cad uga iibinayey xiriirro iyada oo la adeegsanayo goobo ama sanduuqyo. Ciqaabyadani waxay hoos u dhigeen qiimeynta bogga ama qiimeynta.
Si kastaba ha ahaatee, xitaa ganaaxyada Google ee daran waxay joojin waayeen horumarinta warshadaha. Kuwaas oo ah sababta iibsashada iyo iibinta backlinks waxay heleen siyaabaha cusub ee lagu adkeyn karo matoorada raadinta si ay u ogaadaan waxqabadkooda.
Sida ku cad xeerarka Google, iibsashada ama iibinta backlinks ee ka gudubta PageRank waxay aqbalaan xadgudub kadis ah. Haddii laguu garto iibsashada xiriirinta si loo wanaajiyo darajooyinka bogga, goobtaada waxay u badantahay inay rigoore ka hesho Google. Taasi waa sababta, haddii aad ku hawlan tahay hawlahaas, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid khatarta. Iibinta iyo iibinta backlinks 2016
Lacagta martida ee lacag bixinta
Si loo helo shabakadaha bixiya awooda u dir boostada boggooda, waxaad u baahan tahay inaad gashid "iibinta boostada" ee sanduuqa raadinta Google. Qaar ka mid ah adeegyadani waxay ku siin doonaan adeegga dhismaha ee xiriirka tooska ah oo kharashka ku baxaya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo badan oo ah tayada dhexe ee tayada dhexe leh qiime jaban. Waxaa jira qaar ka mid ah soo jeedinta qoraallada tayada sare ee tifaftirka ah ee dib loo soo celiyo. Xaaladdan, dhinacyadu waxay ku heshiiyeen in ay iskaashadaan lacag la'aan.
iibinta xiriirka ka imaanaya bloggers
Taageerooyin badan oo 2016 ah waxaa abuuray shirkado gaar ah oo laga iibsado bloggers. Xidhiidhyadani ma joogaan oo aan lagu arki karin mashiinnada raadinta waxayna dhif u yihiin dhibaatooyin. Qaar badan oo ka mid ah bloggers ayaa ogaanaya qiimaha dhabta ah ee dhabarka iyo waxay u baahan yihiin lacag bixinta xiriir kasta oo ay dhigeen. Waxaa intaa dheer, waxaa habboon in la sheego in qaar ka mid ah bloggers ay jecelyihiin in ay daabacaan maqaal ku xiran kaliya hal ama laba maalmood. Boqolkiiba ugu weyn ee blogyada iibiya backlinks ayaa lagu meeleeyaa suuqyada soo socda - moodada, hantida, socdaalka, maaliyadda, waxbarashada, ciyaaraha. Qiimaha celceliska qiimaha iibsashada sare ee PR ee 2016 wuxuu ahaa $ 300 oo ah ilaha webka tayada dhexdhexaad ah, iyo in ka badan $ 3000 oo ku saabsan domains caan ah oo tayo sare leh Source .